Cudurka chicken | February 2020
Ugu Weyn Ee Cudurka chicken
Dunida adduunka, xoolaha iyo dhirta digaaga ayaa ka mid ah meelaha ugu faa'iidada badan ee beeraha. Laakiin si ay u koraan shimbir caafimaad qaba waxaad u baahan tahay inaad la socoto xaaladooda xabsiyada. Gargaarkaagu wuxuu si toos ah ugu tiirsan yahay. Waxaa muhiim ah in la xusuusto xaqiiqda ah in cuduro badani ay ku xiran yihiin quudinta habboon iyo microclimate.
Cudurada digaagga broiler: sida iyo waxa loo daweeyo cudurrada aan faafa ahayn
Qaar badan oo ka mid ah mulkiilayaasha beeraha iyo beeraha yaryar, iibsashada digaaga broiler, waxay u maleynayaan in ay noqon doonto mid jaban oo lagu kalsoonaan karo si ay u koraan digaagga sida marka loo eego isticmaalka kiciyaasha kobaca nabdoon. Dad badan ayaa hore u marayay. Waxay u muuqataa, in qayb ka mid ah khalkhalka qulqulaya ee aan la filaynin lagu daro faa'iidooyinkaas, hal meel oo muhiim ah kuwaas oo ay ku jiraan cudurada digaagga broiler, calaamadaha si sahlan loo aqoonsan karo, iyo hababka daaweynta ee tijaabiyey sannado badan oo waayo-aragnimo ah.
Maxaa la sameeyaa haddii burqadlaha hindhiso, hindhiso, shuban: sida loo daweeyo cudurrada digaaga
Broilers ayaa caan ku ah beeralayda iyo milkiilayaasha beeraha yar yar. Kobaca degdegga ah iyo fududaynta content ayaa soo jiidata dad badan. Будущим владельцам будет полезно узнать, какие болезни могут проявиться у цыплят, каковы их симптомы и лечение. Устойчивость бройлеров к болезням Бройлеры суточного возраста очень уязвимы, поэтому требуют особого внимания.
Xalka afka "Baytril" 10% - tilmaamaha isticmaalka
Maanta waxaan ka hadli doonaa daroogada noocan ah sida "Baytril", oo si ballaaran loo isticmaalo daawada xoolaha. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo mycoplasmosis iyo infakshanka bakteeriyada ee shimbiraha guriga ku nool. Maqaalkan waxaad ku baran doontaa sifooyinka ugu muhiimsan ee qalabkan. Qeexidda, qaabka iyo foomka sii deynta daroogada Daawada waxaa ku jira 25 g of enrofloxacin.
Bacriminta ayaa muddo dheer ku soo kordhay beeraha digaaga iyo qoysaska. Waxaa jira sababo taas oo ah - digaagga noocan oo kale ah ayaa si aan qarsoodi lahayn loo daryeelo isla markaana dhakhso u koraan. Laakiin sidoo kale waxay si joogto ah u dhiibaan dhibaatooyinka sayidkooda. Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu caansan waa shuban shimbiraha, sidaas darteed dhibaatadani waxay u baahan tahay tixgelin gaar ah.
Sida loo daaweeyo shubanka digaagga
Beeraleyda digaagga ee cusubi waxay ku hawlan yihiin beerista broilers, waxay la kulmi karaan rabsho sidan shuban shuban. Waa maxay sababta cudurka iyo sida loola macaamilo, waxaan ka fiirsanaynaa maqaalkan. Sababaha shubanka Sababaha cudurada digaaga ayaa noqon kara: caabuqyada sababa xaaladaha saboolka ah; quudinta tayada yar; heleen shakhsiyaad jiran.
Sidee iyo waxa loo daaweeyo coccidiosis ee digaagga
Digaagga, sida digaagga dadka waaweyn ama noocyada kale ee digaaga, waxay ku dhici karaan cuduro kala duwan. Mid ka mid ah chicks nolosha ugu hanjabaadda ee xanuunka waa coccidiosis. Aan u fiirsano waxa ku saabsan coccidiosis, sababta ay u dhacdo iyo sida loo caawiyo shimbirta ka takhalusaan cudurkan. Waa maxay coccidiosis? Coccidiosis waa cudur isdifaacid ah oo ay sababaan cayayaanka aan cagaha lahayn ee coccidia.
Waxa la sameeyo haddii ay digaagaan koraan
Qodobada koraya waxay keeni karaan dhibaatooyin badan beeralayda digaaga: marxaladda ugu horreysa ee noloshooda, digaagga ayaa aad u xasaasi u ah xaaladaha dibedda - isbeddel kasta ayaa si xun u saameyn kara horumarkooda. Si looga hortago tan, waxaa lagama maarmaan ah in si taxadar leh loo xakameeyo xaaladaha cimilada ee chicks, si ay ula socdaan cuntadooda, si ay u fuliyaan tallaabooyin ka hortag ah si looga hortago cudurrada, iyo sidoo kale inay ogaadaan sababaha ugu muhiimsan ee koritaanka dhalinyarada.
Sidee loo daweeyaa hindhisada, hinraaca, qufaca digaagga iyo digaagga
Hannaanka hirgelinta shimbiraha, mid ayaa mararka qaar la kulmi kara calaamadaha cilladda leh sida qufaca iyo hindhisada. Xanuunada kale ee neefsashada ayaa sidoo kale dhici karta, sida neefsashada culus, xiiq xarg badan. Diidmada calaamadahan waxay sababi kartaa geerida shimbir iyo luminta qayb muhiim ah oo ka mid ah dadweynaha.
Waa maxay sababta qashinka loo jarayo
Digaagga mar walba waxay u baahdaan fiiro dheeraad ah oo ka timaadda jilayaasha, sababtoo ah difaaca ilmaha ee aan weli awoodin in uu u adkeysto saameynta waxyeellada ee deegaanka, sidaas darteed chicks ayaa si fudud u qaadaya cuduro kala duwan. Haddii aadan si degdeg ah uga jawaabin dhibaatooyinka la kulmay, markaa waxaa jira halis ah in lumiyo dhammaan xoolaha.
Maxaa dhacaya haddii digaagga u dhinto
Marka la abuuro digaag heer sare ah oo digaag ah, beeralay badani waxay la kulmaan dhibaatooyin aad u culus, oo ay ku jiraan dhammaan noocyada cudurada iyo waxyeellada ka dhalatay hannaanka beeraha. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah dayrta dhoobada digaagga. Xaaladdu waxay leedahay cawaaqib culus oo dhalinyarada ah, sababtoo ah si deg deg ah oo jirka u jilicsan ayaa sababi karta geerida dhammaan cayayaanka.
Sidee iyo waxa loo daaweeyo digaagga jilicsan
Digaaga yaryar waxay u nugul yihiin cuduro badan oo badanaa keena dhimasho todobaadkii ugu horreeyay ee noloshooda. Dabcan, way adag tahay beeralayda cusub ee hilibka digaaga ah in ay xasuusato dhammaan noocyada cudurada suurtagalka ah, laakiin waa inaad ka warqabtaa kuwa ugu caansan. Maqaalkani, waxaanu bixinaynaa dhibaatada caynkaas ah ee loo yaqaan 'pullorosis, oo kuu sheegi kara calaamadaha, ogaanshaha iyo daaweynta.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Cudurka chicken 2020